चौबीस घण्टामा ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिए, ४ सय १४ जना निको भए - ePosttimes
Homeकोरोनाचौबीस घण्टामा ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिए, ४ सय १४ जना निको भए
२९ पुष २०७७, बुधबार ११:२७ कोरोना, राष्ट्रिय, समाचार 0
पुस-२९, काठमाडौं । पछिल्लो चौबीस घण्टामा कोरोना भाइरसका ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै ४ सय १४ जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ सम्बन्धी दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्दै हालसम्म दुईलाख ६६ ह्जार १ सय ४३ जना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको उल्लेख गरेको छ । यसै गरी हालसम्म दुई लाख ५९ हजार ७ सय ७२ जना सङ्क्रमित निको भएका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण ५ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार ९ सय ३७ पुगेको छ ।
498500cookie-checkचौबीस घण्टामा ४ सय ४५ जना सङ्क्रमित थपिए, ४ सय १४ जना निको भएyes
१२०१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८ सय ५२ जना डिस्चार्ज काठमाडौं मेडिकल कलेजमा १९९९ मा पीसीआर परीक्षण देशभर १२ सय ४६ काेराेना संक्रमित थपिए कोरोना विरुद्धको दशलाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो ३ हजार १ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिँदा २५ को मृत्यु जोन्सन खोप र चीनको भेरोसेल खोपमा के फरक छ ? उपत्यकामा खुकुलो भयो निषेधाज्ञा : यातायात र पसलसँगै के खुल्यो ? के खुलेन ? मुलुकमै सबैभन्दा ढिलो भएको आयोजना मेलम्ची